Usarasa Izwi Rako | Martech Zone
Usarasa Izwi Rako
Svondo, Kukadzi 10, 2013 Svondo, Kurume 24, 2013 Douglas Karr
Ini ndakagamuchira mhinduro kubva kune akati wandei vanhu izvo zvatichangobva kutumira zvanga zviri dry. Ini handidi kuita nharo nazvo - isu tanga takabatikana kuita yakawanda yakadzika tsvagiridzo pane maturusi uye maficha ekunonoka. Zvinotaridza kuti pakadzika patinoita tsvagiridzo, zvinonyanya kuoma kunyora ipfupi posvo iyo inoita chikuva kururamisira asi zvakadaro ichive nechokwadi chekuti izwi rako rinonzwika.
Iyi shamwari yangu anofarira kuverenga blog, uye anonyora pairi futi, saka ndiri kuteerera uye ndichaita shanduko. Neposvo yega yega, ini ndiri kuzowedzera mamwe mavara kuhurukuro newe. Martech Zone inotora tarisiro yakajeka yekuti tekinoroji ingabatsira sei vashambadziri. Zvinosemesa ndezvekuti ini handina tariro. Ini ndinonzwa sekunge munda wezvekushandisa kutibatsira wakafara uye mutete - uine mukana wakawanda wekuyambuka-chiteshi kushambadzira masystem ayo anotibatsira kuungana, kuyera uye kukwidziridza kutaurirana kwedu netarisiro nevatengi.
Tiri kufunga zvakare nezvekuwedzera mamwe mazwi ku Martech Zone. Ini ndinofunga pane mukana wekuwedzera mukuru wekushambadzira kana tekinoroji pfungwa angave ari padyo nenzvimbo huru dzekutengesa nzvimbo dzeNew York, Boston, kana San Francisco. Kana iwe uri tekinoroji munyori… kunyanya mumwe ane pfungwa yekuseka, isu tinoda kutaura newe. Kutsvaga kwedu kusvika parizvino hakuna kuguma nezvakawanda zvinotungamira.
Zvemukati hazvifanire kunyorwa kungo nyora zvemukati. Iwe unogona kuona kuti zvemukati medu zvinopera uye zvinoyerera. Zvimwe zvacho zvinokonzerwa nebasa redu, asi kazhinji kazhinji, ingori nyaya yekuti isu hatina chinhu chakakosha kutaura. Tinoda yega yega blog post kubatsira vashambadzi. Yese posvo.
Zvakare, isu takawedzera izwi redu needu podcast, email chirongwa uye mavhidhiyo. Takabatana zvikwata ne Kumucheto kweWebhu Radio kuburitsa nyanzvi redhiyo show (yakaburitswa munharaunda) ichiperekedzwa neimwe vhidhiyo yakanaka. Ive neshuwa yekuisa mukati - unogona kutiwana isu kuburikidza neyedu IPhone app, iTunes, Stitcher uye Youtube.
Ini handina chokwadi chekuti ndiani akanyora izwi rekuti "social media", asi vaive vakapenya. Zvemukati midhiya ... asi zvemukati zvisina izwi hazvisi zvemagariro, zvakangonaka vezvenhau. Usarase izwi rako. Zvichengete zvemagariro.
Tags: Kushambadzira Podcastunhusitairaizwi
Twitter Kushambadzira Kuwedzera Vateveri pa $ 0.823 Imwe neimwe
Iwe uri Chaizvoizvo mu1% yeLinkedIn?